Brinker International waxay daabacday natiijooyinka Q1 2022 ee la doortay
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Riix halkan haddii kani yahay war-saxaafadeedkaaga! » Brinker International waxay daabacday natiijooyinka Q1 2022 ee la doortay
Brinker International Inc. .
"Ruuxa koowaad ee Brinker wuxuu keenay iib wanaagsan wuxuuna sii waday inuu si aad ah uga sarreeyo warshadaha taraafikada," ayuu yiri Wyman Roberts, Madaxa Fulinta iyo Madaxweynaha. “Laakiin qalliinka COVID ee bilaabmay bishii Agoosto wuxuu uga sii daray caqabadaha shaqada iyo badeecadaha oo dhan wuxuuna saameeyay xadkeenna iyo xariiqda hoose si ka badan sidii aan filaynay. Waxaan ka jawaabeynaa dabaylahaan COVID iyada oo diiradda la saarayo dadaallada shaqaaleysiinta iyo sii -haynta, iyo la shaqeynta la -hawlgalayaasheena si aan u helno xasillooni dheeraad ah oo ku saabsan jawiga silsiladda sahayda. Intaa waxa dheer, waxaanu qaadnay talaabooyin kordhin degdeg ah, anagoo kordhinayna yoolkeena sanadka oo dhan 3% – 3.5%, si aanu u dhimo kharashaadka sicir bararka oo aanu ilaalino xad dhaafka inta aanu hore u soconay.”
Miisaaniyadda 2022 Tilmaamaha - Qeybta Koowaad
Iibinta Shirkadda Brinker International ee rubuca hore ee maaliyadeed 2022 waxay kor u kacday $ 859.6 milyan marka la barbar dhigo $ 728.2 milyan rubucii hore ee maaliyadda 2021.
Dakhliga hawlgalka ee rubuca hore ee maaliyadeedka 2022 wuxuu kordhay $ 25.6 milyan marka la barbar dhigo $ 24.4 milyan rubuca hore ee maaliyadeed 2021. Dakhliga hawlgalka, oo ah boqolkiiba Dakhliga Guud, rubucii hore ee maaliyadda 2022 wuxuu hoos ugu dhacay 2.9% marka la barbar dhigo 3.3% rubuci hore ee miisaaniyada 2021.
Xadka ka shaqaynaya maqaayadda, oo ah boqolkiiba iibka Shirkadda, rubuca hore ee maaliyadda 2022 ayaa hoos ugu dhacday 10.4% marka la barbar dhigo 11.6% rubucii hore ee maaliyadda 2021.
Darawalada ugu horreeya ee hoos u dhaca xaddiga hawlgalka Maqaayadda waxay ahaayeen 150 bps oo ah qiimaha shaqada maqaayadda oo sare ah iyo 60 bps oo ah qiimaha badeecadda oo sarreeya. Qiimaha shaqada makhaayadda ayaa kordhay sababtoo ah sicirka suuqa iyo mudnaanta ayaa kordhay. Kordhinta ku -meel -gaadhka ah ee ku -meel -gaadhka ah iyo kharashyada tababarka ayaa iyaduna qayb ka qaadatay kororka.
Dakhliga saafiga ah ee saami la khafiifiyey, oo ku saleysan GAAP, rubucii hore ee maaliyadeedka 2022 wuxuu kordhay $ 0.28 marka la barbar dhigo $ 0.23 rubucii hore ee maaliyadda 2021.
Dakhliga saafiga ah ee saamigii la qasi jiray, marka laga reebo walxaha gaarka ah, rubuci hore ee miisaaniyada 2022 wuxuu kordhay ilaa $0.34 marka la barbar dhigo $0.28 rubuci hore ee miisaaniyada 2021.